काठमाडौंमा बालेन्द्र साहको जितको अर्थ
१५० पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख बन्ने महिलाको हक हरण भयोः पाण्डे
‘काठमाडौंमा मोनोरेल सम्भव छैन, विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्छौं’
बालेनको जित परिवर्तनको सङ्केत होः राजेन्द्र महतो
बेलायती संस्था बीआईआईको नेपालमा १२ अर्ब लगानी
माधव नेपालको प्रश्न– जङ्गलै नभएको निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्नुको कारण के हो?
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर समायोजन हुन्छ: मन्त्री बडू
मन्त्री बडूले बोलेका असंसदीय शब्द हटाउन सभामुखको निर्देशन
आयात नियन्त्रण समाधान होइन
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति भएन* सरकारले नेपाल प्रहरीकाे महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन।
भारतीय नागरिकको फ्ल्याटबाट बरामद भएको थियो साढे २२ किलो सुन प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जबाट साढे २२ किलो सुन बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका-६,रेशमकोठीस्थित् गणेश अपार्टमेन्टको तेस्रो तलाको ३०३ नम्बर फ्ल्याटमा बस्ने भारतीय नागरिक अशोक सिन्हाको कोठाबाट उक्त सुन बरामद गरिएको एसपी गंगा पन्तले बताइन्।
थप बन्दाबन्दीबारे विज्ञहरुसँगको छलफलमा देउवा र ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेपछि सम्बन्धित विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँगको छलफलमा विपक्षी दलका नेताहरु पनि सहभागी छन्।
विवादका बीच सुशील भट्ट लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले भट्टलाई बोर्डको आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
गुलजारका त्रिवेणी: रगत तप्पतप्प खसिरहन्छ टाढासम्म मेरो साथमै थियो ऊ, तर एक दिन फर्केर हेर्दा देखें- त्यो मित्र थिएन साथमा खल्ती फाटेपछि केही सिक्का हराइजान्छ !
सरकार किन ‘अमानवीय’ देखिंदैछ ? कोरोना भाइरस रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको एकपछि अर्को अपरिपक्व र विवादित निर्णयले आम नजरमा सरकारको छवि ‘अमानवीय’ बनाइदिएको छ । सयौं नागरिकले भोको पेट लामो पैदल यात्रा हिंड्नुपर्ने कष्ट उठाउनुपरेको पछिल्लो प्रकरण त्यसको एक उदाहरण हो ।
पुष्पलाल, जसले २०३३ सालमै गणतन्त्र आउने ठोकुवा गरेका थिए!
लोकतान्त्रिक मूल्य र देशभक्तिका पक्षपाती पुष्पलालले नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति र विकासका विभिन्न कारणको विश्लेषण गर्दै राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुने ठोकुवा २०३३ सालमै गरेका थिए।
पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन्।
बेलायती संस्था बीआईआईको नेपालमा १२ अर्ब लगानी बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बीआईआई) ले नेपालमा १०० मिलियन डलर (करीब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गरिसकेको जनाएको छ।
माधव नेपालको प्रश्न– जङ्गलै नभएको निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्नुको कारण के हो? नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दुःखद भनेका छन्।
नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पारिदिंदैन न त अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सघाउँछ।
बलियो अर्थतन्त्रको जग: सामाजिक सुरक्षा
धेरै विकसित मुलुककै हाराहारी हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा मुनि पुगिसकेको छ। हामी धनी हुनु अगावै बूढो देश हुने बाटोमा छौं। यस्तै भइरहे केही वर्षमै काम गर्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने वर्गको सङ्ख्या स्वात्तै घट्नेछ।
कांग्रेसको भोटमा माओवादीको रजाइँ
गठबन्धनको सहयोग विना जितेका पालिका प्रमुख र अध्यक्षको सङ्ख्या जोड्दा चौथो स्थानको जनता समाजवादी पार्टीले भन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले करीब एक दर्जन पालिका प्रमुख मात्रै बढी जितेको देखिन्छ।
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बीआईआई) ले नेपालमा १०० मिलियन डलर (करीब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी लगानी गरिसकेको जनाएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर समायोजन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन्।
अर्थतन्त्र सुधार्न कर्जा र ब्याजदरमा थप कडाइ गर्ने राष्ट्र ब्यांकको सङ्केत
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले फेरि ब्याजदर वृद्धिको सङ्केत गरेको छ।